दुई जना गम्भीर शारीरिक अशक्त जापानको संसदमा «
दुई जना गम्भीर शारीरिक अशक्त जापानको संसदमा
प्रकाशित मिति :2August, 2019 6:43 am
जापान (बीबीसी) । जापानमा पहिलो पटक दुई जना गम्भीर शारीरिक अशक्त सांसद संसदमा उपस्थित भएका छन् । यासुहीको फुनागो र इको किमुरा दुबै जना पक्षघात पीडित हुन् । उनीहरु आफ्नो आवश्यकताका लागि अरुमा भर पर्छन् । यसअघि सम्पन्न निर्वाचनमा दुबै जना निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरुको जितलाई ‘महत्वपूर्ण कदम’ भनिएको छ । यससँगै जापानका शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्ति तथा फरक क्षमता व्यक्तिहरुको विषय उठ्‍ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जापानको माथिल्लो संसदले उनीहरुको सजिलो पहुँच तथा आवतजावतका लागि संसद भवनमा विशेष परिवर्तन गरिरहेको छ । नेशनल डाइटको मुल गेटबाट पहिलो पटक उनीहरुलाई संसद भवनभित्र लैजानेक्रममा बिहीबार विशेष समारोह गरिएको थियो ।
युसोहीको फुनागो एमीयोट्रोफिक ल्याट्रल स्लोरिसस् (एएलएस- नसासम्बन्धि एकप्रकारको रोग) रोगबाट ग्रसित छन् । उनले कम्युटर प्रणालीमार्फत तथा सहयोगीको माध्यमबाट संवाद गर्छन् । ६१ वर्षीय फुनागोको सन् २००० उपचार गरिएको थियो । त्यसपश्चात उनले आवतजावत गर्न नसक्ने समस्याबाट ग्रसित भएका थिए । उनले भने, “यस क्षणसम्म आइपुग्दा म निकै भावुक भएको छु । म शारीरिक रुपमा कमजोर देखिन सक्छु । तर, हिम्मत अन्यभन्दा कम छैन – चाहे त्यो जीवन मृत्युकै विषय किन नहोस् ।”
त्यसैगरी अर्की सांसद इको किमुरा पनि नसासम्बन्धी रोगबाट ग्रसित छन् । उनलको घाँटीभन्दा तल दाया हातबाहेक कुनै अंग चल्दैनन् । तर, समाजमा शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरुको एकिकरणको प्रबर्द्धनका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन् ।
कुन पार्टीका सांसद हुन् ?
दुबै जना जापानको सानो वाम दलबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जापानका अभिनेताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका तारो यमामोटोको दल रीयुवा शिन्सेनगुमीले दुबैजनालाई उमेदवार बनाएको थियो । उक्त दलले समाजमा कसैलाई बहिष्कार गर्न नहुने र हरेकको समान अधिकार हुने विषयमा जोड दिँदै जापानको परम्परागत समाजमा वकालत गरेको थियो ।
यस दलले फरक क्षमता भएकासँगै एकल महिला-पुरुष, पार्ट टाइम काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । यस दलले निर्वाचनमा जम्मा दुई सिटमा जित हात पारेको थियो । पार्टीका संस्थापक तारो यमामोटोले प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव जितेका थिए । तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट गर्ने सांसदमा पनि फुनागो र किमुरी नियुक्त गरिएको थियो ।
संसदमा के परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?
जापानको माथिल्लो सदनमा उनीहरुको प्रवेश भएपछि संसद भवनको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुको सहज आवतजावतका लागि अवरोधका रुपमा रहेका विभिन्‍न संरचना हटाएर नयाँ र पहुँचयोग्य संरचना बनाउन काम भइरहेको छ । संसदमा ह्वील चेयर प्रयोग गर्ने यी दुई नै पहिला सांसद भने होइनन् । तर, गम्भीर शारीरिक अशक्त भएका पहिला सांसद भने हुन् । संसदमा भएका पुराना सिटहरु हटाएका छन् भने संसद चलिरहेको समयमा पनि हेरचाह गर्ने व्यक्ति उपस्थित हुन पाउने नियम बनाइएको छ ।
जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकभर ९० लाख ६३ हजार फरक क्षमताका व्यक्तिहरु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।